Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Olivier Giroud Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Mpikomy mpikorisa". Ny tantaran'i Olivier Giroud ao amin'ny tantaram-pahibemaso misongadina avy amin'ny tantaram-piainan'ny tantaram-pitiavana dia mitondra anao feno fitantarana momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy tsy dia vitsy no mihevitra ny biography of Olivier Giroud izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Olivier Giroud dia teraka tamin'ny andro 30 tamin'ny volana 1986 tao Chambéry, atsimon'i Frantsa.
Hatramin'ny fahazazany (avy amin'ny taona 6 taona), dia nanjary nalaza tamin'ny baolina izy noho ny zokiny lahy, Romain Giroud izay 10 taona zokiny.
Nalahelo i Olivier noho ny tsy fahombiazany talohan'ny nanombohany ny asany. Nitranga izany rehefa nahita ny fialan-tsasatra nanjo ny asan'ny rahalahiny. Nanapa-kevitra ny handao ny baolina kitra ny anadahiny mba ho mpitsabo mpanampy. Nampalahelo an'i Roman ny ray aman-dreniny satria tsy nahavita namela ohatra tsara izy.
Ankoatra ny tahotra amin'ny asa, i Olivier ihany koa dia natahotra ihany koa ny endrika Comédie 1980 'Alf' fony izy mbola kely. Indray mandeha izy dia niresaka momba ny fomba nanesoran'ny zokiny azy matetika momba ny tahony an'ilay kintana sit-in-droa mahafinaritra.
Na dia teo aza ny hatsaram-panahin'i Alf, dia i Olivier Olivier dia liana tamin'ny fikarakarana ny zavaboary.
Rehefa nanontaniana momba izay zavatra natahorany ny ankamaroany, dia hoy i Giroud: 'Nanjary naneso ahy ny zandriko lahy momba ny ankizy TV antsoina hoe Alf. Natahotra azy aho satria tena ratsy tarehy izy. Ny rahalahiko dia efa niteny hoe: Mitandrema, i Alf no hitondra anao anio alina! ' Nandeha lavitra loatra izy!
Taorian'ny toro-hevitra manosika be dia nanapa-kevitra ny hanome baolina baolina kitra i Olivier Olivier. Izany no nodidiany hitondra ny voninahitra very indray ao an-tranony izay noraisina taloha "Fianakaviana mpilalao baolina"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Olivier Giroud dia nipoitra tao amin'ny tanànan'i Froges, akaikin'i Grenoble. Nanomboka ny asany tamin'ny lalao baolina kitra izy nilalao ho an'ny klioban'ny tanindrazany, Olympique Club de Froges.
Fanombohana an'i Career Olivier Giroud
Nanao fampiofanana nandritra ny enin-taona tao amin'ny klioba izy talohan'ny nifindrany tamin'ny klioban'ny mpanazatra Grenoble tamin'ny taona 13.
Rehefa nahita ny zava-nitranga tamin'i Romain izy, ary nalefa haka ny Istres teo amin'ny laharana fahatelo, dia somary nandomoka ihany rehefa nokarohin'ny klioba azy ny sangany, nilaza izy fa tsy manana ny toetoetrany amin'ny elit.
Nanazava izany i Olivier Giroud. Amin'ny teniny .... "Tsy maintsy nisambotra indray aho tamin'ny famerenana indray tamin'ny ligy ambany kokoa," hoy izy. "Saingy tsy nilavo lefona mihitsy aho."
Nanaisotra ny alahelony i Olivier ary nahatonga azy ho anisan'ny avonavona sy vokatra. Nanosika ny tenany ho ambony izy.
Nanaraka ny Tours tao 2008 izy tatỳ aoriana. Tamin'ny vanim-potoana faharoa tao Tours, izy no mpilalao ambony indrindra tamin'ny tanjona 21. Nahazo làlana ho an'i Montpellier tampony izy.
Young Olivier Giroud- Career Story
I Giroud indray no mpilalao ambony indrindra tamin'ny tanjona 21 tao amin'ny vanim-potoanan'ny 2011-12, ka nanome ny klioba ny lahatsorany tamin'ny Ligue 1 voalohany talohan'ny nifindrany tany Arsenal. Ny ambiny araka izay efa nitenenan'izy ireo foana, dia nanamafy ny trano hosory.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fanambarana dia nanambara fa avy amin'i family background iray i Olivier Giroud. Tsy dia fantatra loatra ny momba ny rainy sy ny reniny satria nanapa-kevitra ny hiala amin'ny media izy ireo.
rahalahiny avy; Araka ny voalaza tetsy aloha, i Olivier dia zokiny lahy, Romain, izay mpilalao baolina kitra koa. Nirotsaka tao amin'ny Akademia Auxerre izy ary nisafidy an'i Frantsa tao ambany 15 sy ambany-17, miaraka amin'ny mpilalao toy ny Thierry Henry, David Trezeguet ary Nicolas Anelka, fa farany dia nandao ny asa matihanina matihanina mba hianatra sy ho tonga sakafo ara-tsakafo.
Nahatsiaro i Olivier. "Nampiofanina tao Auxerre izy, fanantenana, saingy tsy nanana asa matihanina mihitsy izy". Niverina nianatra i Romain, ary lasa mpitsabo mpanampy.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Giroud dia nanambady an'i Jennifer nanomboka tamin'ny 2011.
Olivier Giroud sy i Wife Jennifer
I Jade zanany vavy dia teraka tamin'ny 18 June, 2013.
Ny zanakavavin'i Olivier, Jade Giroud dia nahatonga ny rainy hahatsapa fa mety hitera-doza ny ray aman-dreny. Olivier Giroud izay tsy nampiasain'ny ankizy na oviana na oviana dia tsy maintsy namorona fotoana bebe kokoa hanentanana sy hanohanana ny fampandrosoana ny zaza ao am-bohoka, ara-batana, ara-pihetsehampo, ara-tsosialy ary ara-tsaina.
Tamin'ny volana Novambra 2015, Olivier sy Jennifer Giroud no nanomana ny fisotroan-drononon'i Jennifer tao amin'ny kapa mena amin'ny Global Gift Gala any Londres. Tamin'ny volana 7, 2016, niteraka zazalahy kely iray antsoina hoe Evan i Jennifer. Giroud dia manolotra ny tanjony amin'ny zanany lahy, Evan izay tena tiany.
Tahaka ny tamin'ny oktobra 2017, dia niandry zaza fahatelo ireo mpivady.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -The Scandal
Tamin'ny volana febroary 2014, dia naharomotra ny sarin'ny Olivier Giroud. Midika izany fa ny famoahana sary mampihetsi-po, ao amin'ny gazety an-gazety anglisy Ny masoandro. Ity sary ity dia maneho fifandraisana hafahafa amin'i Olivier Giroud sy Celia Kay, modely lavabe.
Izany ihany koa, tamin'ny Febroary 2014, dia niaiky i Giroud fa nihomehezana tamin'ny vadiny ny modely Celia Kay.
Taorian'io toe-javatra io, dia nandefa fialantsiny tamin'ny vadiny izy, saingy nanizingizina izy fa tsy nanitsakitsa-bady. Wenger dia tsy naneho ny heviny momba izany "Manaja ny fiainany manokana".
Celia Kay dia nanam-potoana hamaliana ireo mpitsikera ao amin'ny media sosialy.
Na i Giroud sy ny vadiny aza nametraka ny anton'izany ary tsy nisy fampahalalana momba ny fisaraham-panambadiany.
Raheem Sterling, Edinson Cavani ary Antony Martial dia nandray anjara tamin'ny fametahana tranga tahaka ny an'i Olivier.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Handsomeness
Giroud dia manana laza tsara Frantsa noho ny maha-toetra mahagaga sy mahafinaritra azy. Tao amin'ny 2014 dia lasa endrika izy Hugo Boss's Boss Bottled ny fofon'olombelona.
Ny volana Febroary Xnumx Giroud dia nifidy ny 'Hottest Premier League Player'. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny GQ, hoy izy David Beckham ho fitaomam-panahy ho an'ny fomba fijery azy, milaza fa Beckham "Style is iconic".
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -fivavahana
Giroud dia Katolika ary manana tatoazy eo amin'ny sandriny havanana avy amin'ny Salamo 23 amin'ny teny latina: "Ny fitondràny ahy dia tsy maintsy mihaino ahy" ("Jehovah no mpiandry ondriko, ka tsy tiako").
Manoritsoritra ny tenany ho toy ny "Olona tena mino [...] tsy miresaka momba ny lalao aho fa manao vavaka kely ao am-poko"
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiaraha-miasa amin'i Koscielny
Giroud sy Koscielny dia mpiara-miasa amin'ny Tours FC tamin'ny vanim-potoanan'ny 2008-09. Mpivady tsy azo sarahina izy ireo ary miara-miasa ao amin'ny efitrano fiandrasana, ny bus, ny sarin'ny ekipa, ny fampiofanana, ny tennis ary ny sakafo hariva. Taorian'ny fiantohana ny famindrana ho any Arsenal, nanambara i Giroud fa kli-mahagaga i Arsenal ary mpanazatra frantsay iray, sy ny rahalahiny "Lolo sy ny Tariny" dia milalao eny.
Koscielny dia antsoina koa hoe "Bosscielny" or "Kos ny Boss," eo amin'ny tarika sy mpankafy azy.
Olivier Giroud Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Style of Play
I Giroud dia afaka milalao amin'ny toerana misokatra maro, fa matetika no milalao toy ny mpikomy na toy ny ivon-toerana. Indraindray dia nampiasaina ho mpikapoka faharoa izy. Ny mpiloka mafimafy kokoa, fantany indrindra fa ny tanjony ambony, ny habe, ny tanjaka, ny laharana ambony, ny tifitra mahery, ny fahafahana mitazona ny baolina miaraka amin'ny lamosiny ho amin'ny tanjona, ary ny lalao an-tserasera. Izy koa dia misy ifandraisany amin'ny famokarana lozam-pifamoivoizana eo amin'ny pejy voalohany izay mamono ireo mpiaro
Olivier Giroud's incredible 'scorpion kick ' Mpanafika ho an'ny Tanjona amin'ny fizarana 2016 / 2017.
Raha mandinika ny fiainan'i Giroud amin'ny isa ianao, dia ho hitanao fa i Giroud dia nilalao tsy tapaka tao amin'ireo klioba teo aloha, raha tsy nisy ny fahavoazana lehibe. Tsy maintsy manana ADN ianao Park Ji-Sung, Dirk Kuyt ary omby iray (ny biby, tsy Oxlade-Chamberlain) mba hanaraka ny haavon'izany.
Lasa mpankafy ankafiziny ny Frantsa Iraisam-pirenen'i Giroud nanomboka tamin'ny fidirana amin'ny Gunners tao 2012. Mpankafy maro no nanahaka ny volony. Ny sasany dia sahiran-tsaina toy ny ankizy eto ambany.
Ny zazalahy sivy taona dia noroahana tao an-dakilasy indray mandeha satria ratra ny volony tahaka ny kintana Arsenal Olivier Giroud.
Nalefa tany an-trano i Danny Purdy rehefa avy niresaka momba ny fitsipiky ny sekoly ambaratonga fohy, ny andaniny sy ny ankilany.
Ny mamanany, i Saraha dia nandrahona ny hisintaka azy hiala ny sekoly ambaratonga faharoa ao Brooklands ao Leighton Buzzard, Bedfordshire, tanteraka. Ny Sarah Mum-of-two, 33, dia tsy maintsy nanontany ny sekoly ho an'ny fitaovana mba hahafahany mampianatra an'i Danny avy any an-trano mandra-pifaliany.
Hoy izy: "Tsy nieritreritra izahay fa ny feheba tahaka an'i Danny dia nanapaka ny fitsipika. Raha mbola mitafy ny fanamiana ara-dalàna ny ankizy ary miasa mafy any am-pianarana, tsy hitako izay olana. Raha ny marina, tsy hitsangana aho ary hijery azy ireo hahatsapa ho toy ny famonoana ny zanako lahy ary tsy hanaisotra azy amin'ny lesona. Nieritreritra foana aho fa mieritreritra ny atidohantsika fa tsy ny volo, fa mazava tsara kosa. "
Na izany aza, niaro ny toetran'ny sekoly i Headman Steven Harrington-Williams. Hoy izy: "Ny zava-nitranga dia niditra tao an-tsekoly niaraka tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny volony izy nopotehina toa an'i Olivier Giroud. Efa saika teo amin'ny hoditra izy ireo raha ela be. Tsy manantena an'izany karazam-bolo izany izahay. "
Taoriana kely dia tsaroan'i Danny Purdy taorian'ny fanesorana ny volombavan'i Olivier Giroud sy ny lesona momba ny fitsipika momba ny trondro ho an'ny ankizy mpianatra.
Dan-Axel Zagadou Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Tantara Lys Mousset Childhood plus Untold Biography Facts
Tantaran'i Neal Maupay momba ny fahazazan-jaza ary Untold Biography Facts
Allan Saint-Maximin Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Moussa Dembele tantaram-pitiavana bebe kokoa fantatry ny mpahay siansa momba ny tantaram-piainana
Wissam Ben Yedder, tantaram-pitiavana momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Florian Thauvin ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Kevin Gameiro Tantara momba ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra
Daty navaozina: 16 jona 2020
Ny tantaram-pahaizan'ny Thomas Lemar momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Djibril Cisse Childhood Story Plus tsy nambara Biography facts